अफगानिस्तान : दोस्रो ठूलो शहर कान्धार तालिबानकाे कब्जामा, राजधानीमै आक्रमण हुनसक्ने ! « News24 : Premium News Channel
अफगानिस्तान : दोस्रो ठूलो शहर कान्धार तालिबानकाे कब्जामा, राजधानीमै आक्रमण हुनसक्ने !
एजेन्सी । विद्रोही तालिबान समूहले अफगानिस्तानको दोस्रो ठूलो शहर कान्धार कब्जा गरेको दाबी गरेको छ ।
तालिबान समूहले कान्धारको जेल कब्जा गरेर राजनीतिक कैदीबन्दीहरुलाई मुक्त गरेको एक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । तालिबान समूहको यो दाबी सत्य भएमा अफगानिस्तान सरकारको नियन्त्रणमा अब केबल राजधानी काबुल र केही सानातिना क्षेत्र मात्र बाँकी रहेको छ ।
तालिबानले अब राजधानी काबुल पनि कब्जा गर्न सक्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ । अफगानिस्तानमा २० वर्षदेखि रहँदै आएका अमेरिकी र अन्य विदेशी सैनिक फिर्ता भएलगत्तै तालिबान समूहले एकपछि अर्को शहरमाथि कब्जा जमाउँदै गएका छन् ।
तालिबानले एक हप्ताको बीचमा ३४ प्रान्तीय राजधानीमध्ये ११ मा आफ्नो नियन्त्रण स्थापित गरिसकेको छ । हालैमात्र तालिबानले महत्वपूर्ण शहरहरु गजनी र हेरातलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
गजनीबाट राजधानी काबुल १ सय ५० किलोमिटर मात्रै टाढा पर्दछ । तालिबान समूहले अब राजधानी काबुलमा आक्रमण गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । अमेरिकी सेनाले पनि तालिबानले ३० देखि ९० दिनको अन्तरमा राजधानी काबुल कब्जा गर्न सक्ने आशंका गरेको थियो ।
चेन्नाई (तमिलनाडु) । कोभिड–१९ सङ्क्रमण दरमा आएको वृद्धिपछि तमिलनाडु सरकारले जनवरी ३१ सम्म उक्त राज्यका
रूसी नेता पुटिन र इरानी राष्ट्रपतिबीच अर्को हप्ता मस्कोमा भेटवार्ता हुने
एजेन्सी । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आगामी हप्ता मस्कोमा आफ्ना इरानी समकक्षी इब्राहिम रायसीसँग वार्ता
माली पूर्वराष्ट्रपति इब्राहिम बौबाकर केइताको ७६ वर्षको उमेरमा निधन
एजेन्सी । मालीका पूर्वराष्ट्रपति इब्राहिम बौबाकर केइताको आइतबार राजधानी बामाकोमा ७६ वर्षको उमेरमा निधन भएको
जापानले आइतबार दिउसो २ बजे सुनामी आउने भनेर सुचना गरेको थियो तर रद्द भयो
एजेन्सी । प्यासिफिक टापु राज्य टोंगामा ज्वालामुखी विष्फोट भएपछि जापानका जारी गरिएको सुनामी चेतावनी खतरा